Milishoonni baayyinni isaanii 130 tahan Laga Xaafoo Laga Daadhii irraa walitti qabamanii leenjii ji’a tokkoo – Kichuu
HomeMilishoonni baayyinni isaanii 130 tahan Laga Xaafoo Laga Daadhii irraa walitti qabamanii leenjii ji’a tokkoo
Milishoonni baayyinni isaanii 130 tahan Laga Xaafoo Laga Daadhii irraa walitti qabamanii leenjii ji’a tokkoo
Milishoonni baayyinni isaanii 130 tahan Laga Xaafoo Laga Daadhii irraa walitti qabamanii leenjii ji’a tokkoo qofa fudhatanii gara Tigraay lolaaf adeemuuf jedhu.
Silaa du’umaaf qofa dhaquu,sanayyuu du’a awwaalcha hin qabne. Maatiin milishota kanaa sirriitti itti marmarati nagaa itti dhamaa lamuu wal arguun hin jiru waan ta’eef.
PPn Laga Xaafoo Laga Daadhiitti Milishaa torbee lamaaf Sandaafatti lola TPLF irratti akka hirmaataniif leenjiste guyyaa har’aa eebisiiftee jirti.
Akka odeessi arganne ifa godhutti Qeerroon baay’een erga leenjii xumura ga’ani booda Eebbaa didaani Uffaatas didaani hafan. Sababni isaan eebba irraa hafan immoo lolli amma TPLf waliin tahaa jiru Ummata Oromoo hin ilaallatu jechuun waamicha mooraa qabsoo Oromoo irraa taheef dhagahuun tahuu barameera. Namoota calqaba leenjii seenan Baay’inni dura 180 turan keessaa kan Eebbifamee 126 tahuus barameera.Amma kunneen du’uu deemu moo daabboo baachuuf deemu jarana torbe lamatti leenji’anii?
Guyyoota lamaan darban lolli kallattii sadiin geggeeffamaa ture gara kallattii torbaatti olguddatee yeroo ammaa lola guddaatu deemaa jira. Gama garee Nafxanyaatiin humnoota Addaa poolisii Federaalaa 6700 fi miseensonni Republican Guard 3000 tahan dabalataan hirmaachaa jiru.
Waraanni yeroo ammaa kun helekooptaraan kan deeggaramee fi loltoota guyyoota lamaan kana milishaa Tigraayin marfamee ture baraaruuf fi deemsa gara Maqaleetti tahuuf haala mijataa uumufi jedhameera.Tahus haalli ulfaata waan taheef karoora duulichaa irratti MM Abiyyi Ahimad fi ajajoota waraanaa gidduutti waliigaltee irra hin gahamne jedha odeessi arganne.
Odeeffannoowwan dabalataa hordofnee isiniin geenya.
Irraa Daayimtuu Godina Booranaa PPn ummata keenya hedduu ukkaamsitee hiraarsaa jirti.